ရှငျဘုရငျ Galon ရွှေအရွက်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ | မြန်မာသွားရောက်ကြည့်ရှု
နေအိမ် menu ကို ↓
ရှငျဘုရငျ Galon ရွှေအရွက်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ
နေအိမ်→မန္တလေး→ရှငျဘုရငျ Galon ရွှေအရွက်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ
ငွေကြေး Calculator ကို
ရှငျဘုရငျ Galon ရွှေအရွက်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ 36 လမ်းရှိရှိရာန့်ကိုများထုတ်လုပ်ပါးလွှာအကြမ်းဖျင်းတော်တော်များများကိုရွှေအရွက်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုဖြစ်တယ် 1.5 ရွှေအရွက်၏လက်မရင်ပြင်ထွက်ယူသွားတတ်၏.
အင်္ဂလိပ်စကားပြောန်ထမ်းကိုသင်မြေတပြင်လုံးကုန်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုပြသပါလိမ့်မယ်. အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းအမှန်ကတော့ထိုသို့ – အဲဒီအကြောင်းတစ်ဖဲကြိုးဖြစ်လာသည်အထိရွှေတစ် 2oz button ကို ယူ. တစ်လိပ်-စာနယ်ဇင်းကနေတဆင့် run 3/4 ကျယ်ပြန့်လက်မနှင့် 20 ခြေဘဝါးရှည်လျားသော. သို့တက်ခုတ် 800 တန်းတူအပိုငျးပိုငျး. ယူ 200 အပိုင်းပိုင်း, စက္ကူဖြင့်ခွဲခြားတစ်ဦးချင်းစီအပိုင်းအစ, တစ်ဦးအစုအဝေးကိုထဲသို့သွင်းထားနှင့်ကမြှောက်ဖြစ်ပါတယ်မှီတိုင်အောင်တစ်ဦး hammed အတူကပေါင်. ထိုအခါ, ယခုပိုကြီးဖြတ် 200 သေးငယ်သည်အပိုင်းပိုင်းနှင့် procuedure ပြန်လုပ်အများအပြားပိုပြီးအဆသို့အပိုင်းပိုင်း. ဒါဟာတစ်ဝှမ်းကြီးမားသောသံတူနှင့်အတူသုံးယောက်ကြာ6သေးငယ်တဲ့ပါးလွှာတဲ့အရွက်များသို့ရွှေရိုက်မှနာရီ. ထိုနေ့၏အဆုံးမှာယောက်ျားတို့သည်လှည့်ပတ်စတစ်ခုတည်းကိုရွှေခလုတ်ကိုလှည့်ကြ 2900 ရွှေအရွက်.
လူတို့သညျအရွက် hammering ပြီးဆုံးပါပြီပြီးနောက်သူတို့အရွက်ထွက်ခွဲခြားခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းအဘို့ထိုသူတို့တက် package သူတစ်ဦးကသီးခြား workroom ၌ထိုင်အမျိုးသမီးအုပ်စုလွန်နေကြသည်. အရွက်ဘာသာရေးပစ္စည်းများကိုခေထြားဖို့အသုံးပြုလျက်ရှိအပါအဝင်အများအပြားအသုံးပြုမှုရှိ, အိမ်သူအိမ်သားအလှဆင်ဘို့, ရိုးရာဆေးဝါးများအတွက်ပါဝင်ပစ္စည်းများအဖြစ်, မိတ်ကပ်နှင့်ပင်ချက်ပြုတ်အတွက်.
သငျသညျအိမ်ပြန်ယူ gilded ခဲ့ကြသောရွှေရွက်သို့မဟုတ်အဆင်တန်ဆာမဝယ်နိုင်မည့်အဆောက်အဦးအတွင်း၌သေးငယ်တဲ့အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်ရှိပါတယ်. ဘာမှကိုဝယ်ခြင်းငှါအလွန်နည်းနည်းဖိအား. သင်သည်သူတို့၏သေးငယ်တဲ့ဝင်ငွေဖြည့်စွက်ရန်ဆန္ဒရှိလျှင်တူလုပ်နေလူတို့သညျများ၏ရှေ့မှောက်၌တစ်ဦးလှူဒါန်းမှုပန်းကန်လည်းရှိပါသည်. သူတို့ကအလွန်ခက်ခဲအလုပ်လုပ် certainally.
သင်နေရာချထားအထောက်အကူပြုရန် Google မြေပုံရည်ညွှန်း ရှငျဘုရငျ Galon ရွှေအရွက်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ မန္တလေးတွင်, မြန်မာ – Google ကမြေပုံ
သငျသညျအခြို့သောခက်ခဲကုမ္ပဏီကြီးများနှင့်အလုပ်လုပ်ဒေသခံများမှာဘုရငျ Galon ရွှေအရွက်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကူးအပေါ်တစ်ဦးလူနေမှုခေါင်းဖြစ်စေခြင်းနှင့်ကိုယ်အဘို့ကိုတွေ့မြင်ဘယ်လိုမြင်ချင်ခဲ့လျှင်.
© မြန်မာသွားရောက်ကြည့်ရှု - မြေပုံအညွှန်း - မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက် - Spam များကို - သတ်မှတ်ချက်များ - ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ